China Steel Kuvunguza Buyisela Roller Ukwakha futhi Factory | UJoyroll
Le roller yensimbi ebuyayo ibuye ibizwa nangokuthi i-roller yokuzihlanza, ingahlanza izinto ezinamathelayo ebhande futhi ivikele ukwakheka kuma-roller. I-JOYROLL roller-free spiral return roller inciphisa isikhathi sokuphumula ngenxa yokuhamba kancane noma ukuphutha okuncane kwebhande.
Le roller yensimbi ebuyayo ibuye ibizwa nangokuthi i-roller yokuzihlanza, ingahlanza izinto ezinamathelayo ebhande futhi ivikele ukwakheka kuma-roller. I-JOYROLL yesimbi engenazinsimbi ebuyayo evimbela ukuncipha iyanciphisa isikhathi sokuphumula ngenxa yokuhamba kancane noma ukuphutha okuncane kwebhande.
UkucaciswaUbubanzi be-Roller: 89, 102, 108, 114, 127, 133, 140, 152, 159, 165, 178, 194, 219mmRoller Length: 100-2400mm.Shaft Diameter: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mm uhlobo: 6204, 6205, 6305, 6206, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310Surface Treatment: Electrostatic Powder Coating, Galvanization.Standard: DIN, CEMA, JIS, AS, SANS-SABS, GOST, AFNOR njll.
Izinto ezibonakalayo ze-RAW ZAMA-ROLLERS:1.Pipe: ngokunemba High ERW ipayipi ekhethekile nge encane aphume roundness. Okubalulekile kwe-Q235 kulingana ne-Europe S235JR2.Shaft: Ibha eyindilinga ebandayo ebunjiwe, Izinto Ezingu-45 # ezilingana ne-DIN C45.3. Seal Double, Ikhwalithi Ibanga P5Z34.Bearing House: Cold ipulangwe steel plate, impahla 08AL ilingana Din ST12 / 145.I-Seal yangaphakathi: Lip uhlobo uphawu, Material Inayiloni. 6.Labyrinth Seal: Main Seal System, Material kuyinto Inayiloni. Gcoba: # 2 Amafutha okugcoba okuhlala isikhathi eside, isimo sokusebenza -20 ° c kuye ku-120 ° c8. Ukwelashwa Kwendawo: I-Electrostatic Powder Coating
Ukuvimbela ukwakheka kwempahla, Ukuzihlanza, indawo engeyona induku
Ngokukhethekile kunenzuzo ngezinto ezinamathelayo ohlangothini lokubuyela;